Afar askari oo booliis ah oo ku dhaawacmay weerar ay maleeshiyo katirsan Al-Shabaab ku qaadeen saldhig booliis oo kuyaala Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandAfar askari oo booliis ah oo ku dhaawacmay weerar ay maleeshiyo katirsan Al-Shabaab ku qaadeen saldhig booliis oo kuyaala Boosaaso
February 7, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Magaalada Boosaaso. [Sawirka]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ugu yaraan afar askari oo booliis ah ayaa ku dhaawacmay weerar ay maleeshiyo katirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig booliis oo kuyaala magaalada Boosaaso xalay oo Talaado ahayd, sida ay sheegeen ilo-wareedyo ammaanka ah.
Ilo-wareed katirsan laamaha ammaanka Puntland oo magaciisa qariyay, ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in dhowr maleeshiyo ah oo hubeysan ay xalay fiidkii weerar ku qaadeen saldhiga dhexe ee booliiska Boosaaso.
Maleeshiyada ayaa damcay in ay qabsadaan saldhiga balse ciidamadda ayaa iska difaacay, sida uu sheegay ilo-wareedku.
Askartii dhaawacantay ayaa lagu dabiibayaa hadda isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay weerarka lagu qaaday saldhiga Boosaaso, sida ay ku warantay idaacadooda Radio Al Andalus.
February 22, 2018 Saddex maleeshiyo ah oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn Mareykanka uu ka geystay gobolka Jubbada Dhexe
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Aamiin Cabdullaahi Xaaji Khayr u magacaabay agaasimaha cusub ee haayada PSF, sida lagu sheegay digreeto ka soo baxday madaxtooyada maanta oo Arbaco ah. Haayada Puntland Security Forces [...]